को गोलो अनुहार आकार लागि उचित भौं आकार: वर्णन, उपकरण र सल्लाह
तपाईं एउटा गोलो अनुहार छ भने, त्यसपछि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ। सबै पछि, तपाईं सबैभन्दा सुरिलो र समानुपातिक फारम छ। धेरै पेशेवर मेकअप कलाकारहरू यसलाई सबैभन्दा प्रयोगकर्ता-अनुकूल काम को लागि "सामाग्री" छ भन्छन्। यो गोलो लागि eyebrows को आकार भनेर विश्वास छ अनुहार आकार सबै को पहिले यसको अभिव्यक्ति सेट किनभने, सुन्दर हुनुपर्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई घनिष्ठ ध्यान गर्नुपर्छ किनभने।
तर तिनीहरूमा तपाईं लिन अघि, तपाईं गोलो अनुहार अनुकूल eyebrows को के फारम फेला पार्न आवश्यक छ। उचित चयन तपाईंलाई अनुहार असिद्धता बाहिर चिकना र यसको लाभ हाइलाइट गर्न सक्षम हुनेछ। को eyebrows सुधार, फैशन रुझान बारे मा भूल छैन।
eyebrows आकृति गोलो अनुहार प्रकार को लागि
त्यहाँ सर्वोत्तम गोलो अनुहार संग बालिका गर्न अनुकूल छ जो eyebrows, तीन प्रकारका छन्। साथै, तिनीहरूले भन्दा साधारण हो, यो नरम गोडा र arched तेर्सो eyebrows छ। यी प्रकारका पूर्ण गोलो अनुहार जस्तै भएकोले, त्यसपछि, यस प्रकारको संग, तपाईं को फरक भेरिएसनहरूमा प्रयास गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्छन् eyebrows सुधार मुड।
तेर्सो आकार eyebrows
तपाईं गोलो अनुहार को बढाव बाहिर चिकना गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं eyebrows को यो फारम भेट्नुपर्छ हुनेछ। आखिर, यो नेत्रहीन गोलो हुनेछ। को eyebrows मालिक एक स्वतन्त्र वर्ण, नेतृत्व झुकाव र बलियो गुण छ भनेर यो विश्वास छ। तपाईं inhospitable देखा पर्न चाहँदैनन् भने, नाक गर्न भौं राख्नुहोस्। अलिकति सञ्चार मा राम्रो तिनीहरूलाई उठ्छ - तपाईं थप आकर्षक र अनुकूल छौँ त।
रूपमा उदास देखिदैन भौं टाउको, केहि कम अवस्थित। तिनीहरूलाई सच्याएर भने यो सही हुन सक्छ। राउन्ड - यो गर्न तपाईं eyebrows लामो पार्नू र आफ्नो प्राकृतिक वक्र र टाउको मा केही hairs हटाउन केही सुझावहरु आवश्यक छ। यो पनि अवलोकन तेर्सो eyebrows को सन्तुलन थियो महत्त्वपूर्ण छ।
लागि कस्मेटिक्स रंग eyebrows पनि नजिक ध्यान र सावधान चयन चाहिन्छ। तपाईंलाई थाहा र eyebrows को यो फारम को मूल कालो रंग सबै अनुहार असिद्धता बृद्धि गर्न सक्ने सम्झना गर्नुपर्छ। यो जोगिन, एक विशेष रंग को प्राकृतिक रंग चयन गर्नुहोस्।
नरम गोडा संग Eyebrows
गोलो अनुहार लागि यस्तो आकार eyebrows सबैभन्दा उपयुक्त natures, छैन रोमान्स र स्त्रीत्व को deprived। त्यसपछि दृश्य स्पष्ट र स्पष्टवादी र पनि यसको मालिक केहि rejuvenated हुन्छ सबै किनभने। सायद eyebrows vrazlet हुनेछ बादाम आकारको आँखाले संयुक्त हुन। अन्य कुनै पनि मामला मा, यो गठन भंग eyebrows मा अनुपात एक अर्थमा छ महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो अनुहार को अभिव्यक्ति क्रोधित हुनेछ, चश्मा वा धेरै सिकारी: अन्यथा परिणाम तपाईं हासिल गरेको छ के को विपरीत हुन सक्छ।
गोलो अनुहार लागि यो आकार eyebrows, पनि, उपयुक्त छ। उसलाई Serenity र poise को अभिव्यक्ति दिन हुनेछ। चाप आकारको eyebrows आफ्नो उपस्थिति को एक नरम बाह्य सुविधाहरू बनाउन सक्छ। मनमा राख्न यो फारम ध्यान दिएर लाइन मार्फत काम आवश्यक छ। यो मोड्नु उचाइ सहित, भौं arches को लम्बाइ र मोटाइ को अनुपात सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण छ। ताकि छवि सबैभन्दा प्राकृतिक र जैविक, पालन संयमता र चिल्लो संक्रमण, साथै arcuate लाइनको इष्टतम मोटाइ थियो।
eyebrows गठन: कसरी गर्न?
प्राप्त गर्न सही आकार eyebrows गोलो अनुहार लागि, तपाईँले पहिला इष्टतम लम्बाइ निर्धारण गर्न आवश्यक छ। कसरी यसलाई के गर्ने? यसलाई सरल छ: तपाईं sinuses एक अन्त मा एक पेन्सिल बनाउन आवश्यक र अन्य - आँखा को भित्री कुनामा गर्न। को eyebrows गर्न स्पर्श पेन्सिल, यो सुरु बनाउन ठाउँमा। यसलाई अन्त निर्धारण गर्न, आँखा र भौं को बाहिरी कुना तिर पेन्सिलमा सार्न। तिनीहरू काट्ने ठाउँ, यो बन्द गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
पहिले नै आँखा वरिपरि झुर्रियाँ देखा भएकाहरूलाई लागि, तिनीहरूलाई ध्यान मोड्नु एउटा तरिका छ: यो लम्बाइ ब्रो मा गर्न आवश्यक छ। पनि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो निर्धारण गरिन्छ साथ सबैभन्दा भाग लागि, eyebrows को चौडाई छ आफ्नो अनुहार मा अभिव्यक्ति। त्यसैले, पातलो व्यक्ति मध्यम मोटाई बढी उपयुक्त brows लागि। तिनीहरूले पर्याप्त घनत्व र चौडाई छ गर्नुभयो जहाँ छैन मामला मा, तपाईं एक पेन्सिल, रंग र पाउडर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। रंग, को पाठ्यक्रम, छाला टोन अनुसार चयन गर्न छ।
तपाईं तरल eyebrows र एक कम निधारमा छ भने, सुरु हाइलाइट गर्न पेन्सिल हल्का छाया प्रयोग गर्नुहोस्, र टिप गाढा गर्न आवश्यक छ। जब नजिक आँखा सँगै, तपाईं नेत्रहीन यो shortcoming चिकना गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, दुई सेन्टिमिटर गर्न eyebrows बीच दूरी बढ्छ।
र भने "भाग्यशाली" को unruly भौं hairs गंदा बढ्न र सबै दिशामा bristle छ? यहाँ एक विशेष जेल निर्धारण, तपाईंलाई एउटा विशेष ब्रश प्रयोग गरेर सही दिशा तिनीहरूलाई दिन सक्छ जो मार्फत को सहायता गर्न आउनुहोस्।
गोलो अनुहार थप उपयुक्त छ लागि eyebrows को आकार के हो? उपस्थिति यस प्रकारको सुन्दर ब्रो आकार सुझाव भएकोले eyebrows को अक्सर लाइन सुधार आवश्यक छ। यस मामला मा, तपाईं मात्र हेरविचार गर्न सक्नुहुन्छ। र बालिका तिनीहरूले मूल सुन्दर छन् रूपमा, eyebrows समायोजन चिन्ता गर्न अक्सर छैन।
अनुहार को गोलो आकार को लागि भौं आकार धेरै तरिकामा समायोजित छ। सबै भन्दा लोकप्रिय - तोड। यसको सार सरल छ: चिमटी संग अतिरिक्त बाल छ हटाइयो। यो एउटा द्रुत कुरा छैन, तर को likelihood अतिरिक्त न्यूनतम बाहिर निकाल्न। को eyebrows लागि आत्म-हेरविचार लागि ठूलो तरिका हो।
अर्को विधि - मोम संग कपाल हटाउने। यो हुनत अतिरिक्त बाल को छुटकारा प्राप्त गर्न तेज, तर धेरै पीडादायी तरिका हो। तर यो प्रक्रिया को सना मा लिन राम्रो छ। पनि मोम केही घटक एलर्जी प्रतिक्रिया हुन सक्छ कि सम्झना। तर कुनै कुरा कति छिटो यो विधि थियो, तर अझै पनि चिमटी को आकार ट्रिम छ।
साधारण सूत्रहरू प्रयोग भौं - सबैभन्दा प्राचीन तरिका हो। कार्यान्वयन आफ्नो विधि सरल छ: मुद्दा आधा गुना र गाँठ बाँध गर्न। त्यसपछि यो आफ्नो औंलाहरु सारे मा राखे, र त्यसपछि गर्न गठन कर्ल को बीचमा यो कस आवश्यक छ मुद्दा। त्यसपछि, अतिरिक्त बाल, बस खुला यो मतलब संलग्न र औंलाहरु बन्द गर्नुहोस्।
कसरी सञ्चालन गर्न resorting बिना, युवा लम्ब्याउनु गर्न
Tatu "डेमन" र "एन्जिल" - एक आकर्षण वा दुष्ट आत्माहरूको लागि एक चुनौती?
कसरी घरमा अनुहार क्रीम तयार
बिकनी लागि Trimmer: के के आवश्यक छ यो छ र? लोकप्रिय मोडेल Trimmers
गाडेको बाल - के?
हात (टैटू) र आफ्नो अर्थ मा चरा
भन्दा र कडी संयुक्त को कैप्सूलाइटिस को उपचार कसरि गर्छन?
Rosehip तेल: आवेदन र गुण। छाला को लागि Rosehip तेल - समीक्षा
Sergey Chudakov: जीवनी, फोटो, रचनात्मक
लेखक Pavich Milorad: जीवनी र काम गर्दछ। उद्धरण Milorad Pavic
प्रतिष्ठा - यो सबै भन्दा राम्रो पङ्क्तिबद्ध छ
क्रिसलर टाउन र देश: विनिर्देशों फराकिलो minivan अमेरिकी 5th पुस्ता
पानी तताउने घरेलु: एक अवलोकन, सुविधाहरू, विशेषताहरु र प्रकार
Platonov, "सानो सैनिक": एक संक्षिप्त सारांश र मुख्य क्यारेक्टर
Petunias टेरी: हेरविचार, खेती
कमेडी "पाङ्ग्रा भोजन मा"। अभिनेता र भूमिकाको
माछाको वैक्यूम प्याकेजिङ - यसको दीर्घकालीन संरक्षणको ग्यारेन्टी
सीरम मा आटा। केक र muffins लागि आटा नुस्खा